(SAWIRRO) Guddigii doorashada Dadban ee Puntland oo maanta wareejiyay qalabkii doorashada lagu fuliyay. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Guddigii doorashada Dadban ee Puntland oo maanta wareejiyay qalabkii doorashada lagu fuliyay.
Guddigii doorashooyinka Dadbanayd ee heer Puntland ayaa maanta hay’adda UNDP ku wareejiyay qalabkii ay ku fuliyeen doorashooyinkii aqalka hoose iyo aqalka sare ee ka dhacay Puntland.
Munaasabad lagu qabtay xarunta guddiga doorashada ee Garowe ayaa waxaa goob joog ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada Nabaddoon Khaliif Xasan Aw-cali iyo guddoomiye ku xigeenkiisa Axmed Xuseen Soomaali. Waxaa kaloo goob joog aha madaxa hay’adda UNSOM Haward Bell iyo wakiilo UNDP.
Nabaddoon Khaliif Xasan Aw-Cali ayaa sheegay inay dhammaan wareejiyeen qalabkii lagu fuliyay doorashadii Dadbanayd ee ka dhacay Puntland sanadkii hore, sidoo kale wuxuu umahad celiyay hay’adda UNDP, UNSOM, guddiga doorashada heer federalka iyo cid walba oo ka qeyb qaatay hirgelinta doorashooyinka Dadban.
Wasiirka dastuurka iyo arrimaha dimuqraadiyada ee dowladda Puntland Cali Ciise Oog oo ka hadlay goobta ayaa isagana guddiga doorashada uga mahad celiyay sidii wanaagsanayd ee ay u xafideen qalabkii doorashada iyo sidii ay u guteen waajibaadkoodii qaran.
Axmed Saciid Maxame, madaxa maamulka xafiiska UNDP ee Puntland ayaa uga mahad celiyay guddiga doorashada sida ay u xafideen qalabka doorashada, waxayna ugu dambayn kala saxiixdeen qoraal muujinayay inay kala wareegeen agabkii doorashada lagu qabtay.